Xariga Ka Jarista Iskuulka Barakacayaasha Cadaado – Sen. Abshir Axmad
Xariga Ka Jarista Iskuulka Barakacayaasha Cadaado
Farxad weyn ayey ii tahay maanta in aan xariga ka jaro iskuul Asaasi ah oo wax lagu barayo qaar ka mid ah ubadkeena gudaha dalka ku soo barakacay gaar ahaan kuwa degmada Cadaado ku nool iyaga oo maanta kadib heli doona waxbarasho ifinaysa mustaqbalkooda soona nooleynaysa rajadooda maanta iyo beri.
Maanta waxaan bilaabay socdaal guuleed oo aan albaabada ugu furay magaalada Cadaado iskuulkii koowaad oo aan ugu talo galay in ay wax ku bartaan ubadka deegaanka Galmudug ee aan awooda u lahayn in ay helaan waxbarasho asaasi ah anigoo oofinaya dhaartii iyo ballantii aan u galay dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Dareen aad u wayn ayaan u leeyahay in mustaqbalka dadkeena iyo dalkeena in uu ku jiro gacanta ubadkeena, suurtagalna ma ahan in aan dayacno iyaga mustaqbalkooda.
Waxaan aaminsanahay in u helitaanka waxbarasho u gaar ah ubadka qoysaskoodu gudaha ku barakaceen in ay tahay mid ka mid ah hawlaha uu xafiiskeyga adeega dadweynaha uu ka shaqeyn doono mar walba hadii eebe idmo. Waa hubaal in ay ku dhex jiraan ubadkaas ay abaaraha iyo colaaduhu barakiciyeen kuwii berito hogaamin lahaa dalkaan.
Dhab ahaantii in dib loo xaliyo caqabadaha dalkeena Soomaaliya haysta ma ahan shaqo adag iyo hawl aan la qaban karin, balse waxay inooga baahantahay oo keliya inaan la imaano mayal adayg iyo go’naan guntan si aan dhaqso horey ugu socono.
Marwalba waxaan u taagnaan doonaa horumarinta ubadkeena meel walba oo ay joogaan.
Saboolnimadeenu ma ahan hanti la’aan ee waa rajo la’aan